Egwuregwu nke tulips, ihe omimi nke igbu ọchụ nke Natalia Etxano | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
The tulip agba egwu bụ ihe na-atọ ụtọ nke onye Spen na-ede akwụkwọ bụ Ibon Martín Álvarez. E bipụtara akwụkwọ ahụ na 2019 ma n'oge dị mkpirikpi ọ dị na ebe mbụ ịre ahịa, nke mere ka ọrụ onye edemede ahụ kwalite. Taa, a maara Ibon dị ka otu n'ime ndị kasị mma na-egosipụta ụdị a, a bịara kpọọ ya: "Basque master of suspense".
Ihe omimi malitere site na igbu mmadu Natalia Etxano, onye odeakụkọ na-aga nke ọma si Gernika. E butere mpụ ahụ site na nkwanye site a na-elekọta mmadụ na netwọk ma ruru ọtụtụ puku echiche, nke o juru obodo niile anya. Onye dere akwukwo mere akuko zuru oke; nkọwa ya banyere ikuku dị mma n'anya, dịka nkọwa zuru oke nke nyocha ndị uwe ojii. N'aka nke ha, ihe odide ahụ dị iche iche ma mezuo nke ọma, na eji ihe nkiri egwu egwu.
1 Nchịkọta nke Egwú nke Tulips
2 Nyocha banyere egwu nke tulips
2.5 Ihe omimi
4 Informationfọdụ ozi gbasara onye edemede ahụ: Ibon Martín Álvarez
4.1 Njem site na mba Basque
4.2 Akwụkwọ mmalite
Na nchikota nke The tulip agba egwu
Ọ bụ ụbọchị nkịtị ụgbọ okporo ígwè ụgbọ ala Urdaibai na-aga na mbụ, Na mberede, onye ọkwọ ụgbọ ala hụrụ ihe na anya nri na egwu. Ka ọ na-erute nso, ọ hụrụ nke ọma ihe ọ bụ: ọ bụ nwanyị kegidere oche, jiri tulip uhie n’aka ya. Nwoke ahụ gbalịrị ozugbo ịkwụsị igwe ọrụ ahụ, mana ọ maara n'ime ala na ọ gaghị ekwe omume ịme ya n'oge.
Tupu ọsọ ọsọ, onye ọkwọ ụgbọ ala jisiri ike mata nwanyị ahụ ... ọ bụ banyere nwunye ya, Natalia Etxano, bụ onye nta akụkọ a ma ama na redio si Gernika. Uche ndi oria nke zubere oke ojoo hapuru ekwentị na ebe ahu, nke ejiri mee ka ihe ojoo di na ndu na Facebook. Ọtụtụ puku ndị nkiri kiriri ihe omume ahụ jọgburu onwe ya.
N'ihi ihe omume ndị a, e mere Nkeji Mmetụta Mmetụta Mmetụta Pụrụ Iche, ịmalite nnyocha banyere ikpe ahụ. Otu a mejupụtara sub-inspector Ane Cesteno na onye ibe ya Aitor Goneaga, ya na ndị nnọchi anya ya Julia Lizardi, Txema Martínez na ọkà n'akparamàgwà mmadụ Silvia.
Mgbe ịmalite ase, a na-ekpughere nkọwa pụrụ iche nke mpụ ahụ, na n'etiti ha, nke kacha pụta ìhè ma na-egbu egbu: tulip uhie ma na-egbuke egbuke n'aka onye aja, ihe siri ike ịchọta n'oge mgbụsị akwụkwọ. Nke a na ihe ndị ọzọ na-egosi na ọ bụghị nnọọ ogbu ọchụ ọ bụla na nke ahụ ikekwe egbu egbu.
Arụmụka a na-ewe ike mgbe ha hụrụ ozu ndị ọzọ ụmụ nwanyị nwere ihe akaebe yiri nke a.. N'ihi ya, ọchịchọ a na-amalite n'oge maka onye na-egbu ihe na-agba ọchịchịrị ma nwee nghọta.
Nyocha nke The tulip agba egwu
The tulip agba egwu (2019) obu thriller edoziri na obodo Gernika nke obodo Basque. Akwụkwọ ahụ o nwere 79 obere isi, Offọdụ n’ime ha bụ kọrọ na onye nke atọ site n'aka onye na-akuko ihe omuma, na ndị ọzọ bụ ndị mbụ site na otu onye n’ime akụkọ a.
Ndị protagonists -mmadụ anọ ahụ na ngalaba nyocha- a kọwapụtara ha nke ọma, na akụkọ siri ike, na-akpali akpali ma na-atọ ụtọ, nke na-adịghị agbanahụ n'eziokwu dị ugbu a. Ndị a bụ ndị nwere nuances na ọdịbendị dị iche iche, ndị ha ga-agbanwe nke nta nke nta ka nkata ahụ na-aga n’ihu.
N'etiti ihe odide gosipụtara Ane Cesteno, onye a gwara ya na ndụ ya niile. Mụ na ya, Julia na ndị ọrụ ndị ọzọ na-eme atụmatụ ahụ. Akụkọ nke Ibon na-eduga onye na-agụ ya ịbụ akụkụ nke ndụ ha, ruo n'ókè nke ịhụ ha n'anya dị ka ịkpọasị.
Na mgbakwunye na isi isiokwu nke nyocha ahụ, ndị ọzọ isiokwu na-ọkọnọ. Otu n'ime ihe kachasị mkpa bụ ime ihe ike nke nwoke na-akpakọrịta ịgba chaa chaa. Ha kwụpụkwa mmegbu ndị uwe ojii na nrụrụ aka, mmekpa ahụ, mmegbu na nsogbu ezinụlọ.
Ahụmahụ onye dere akwụkwọ nwetara site na njem ya bụ nke a gosipụtara nke ọma n'akụkọ ihe mere eme niile. Martín na-akọwa ihe ngosi nke ọ bụla na Urdaibai; nsonaazụ njedebe dị mfe ma dị ebube n'otu oge ahụ, nke mere na site n’ịgụ ya, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya iche n’echiche ebe Gernika ma ọ bụ Mundaka dị; nsụda mmiri na ala ndị ọzọ.
Ọnọdụ enigmatic - Nke ọdachi jọgburu onwe ya akọwapụtara na mbido akwụkwọ a sitere na ya. a na-edebe ya n'ahịrị ọ bụla n'akụkọ ahụ. Mkpebi ahụ na-egosipụta oke ọdịda site na dobe, nke na-eme ka onye na-agụ ya nwee mmasị na mmalite ruo n'isi.
The tulip agba egwu nwere oke nnabata dị elu na webụ: ihe karịrị 85% nke ndị na-agụ akwụkwọ nwere mmasị na ya. Na Amazon naanị, ọrụ ahụ nwere ihe karịrị ogo 1.100, yana ngụkọta nke akara 4,4 / 5. Kpakpando ise bu ụzọ, na 5%; ebe ọkwa ndị na-erughị kpakpando atọ dị ole na ole, naanị 57%.
Ndị hụrụ obi erughị ala n'anya ga-enwe obi ụtọ na nkeji nkeji a. Ọ bụ ọrụ a na-agba ọsọ ọsọ, ọhụụ, ọhụụ, na ụda dị egwu na njedebe na-eju anya. O doro anya na, ihe magburu onwe ọzọ maka thriller Fans.
Informationfọdụ ozi gbasara onye edemede ahụ: Ibon Martín Álvarez
Onye nta akụkọ Gipuzkoan na onye edemede Ibon Martín Álvarez mụrụ na 1976 na obodo San Sebastián (Obodo Basque), na nso ókè France. Ọ gụrụ akwụkwọ na Nkwukọrịta na Akuko na Mahadum nke Basque Country. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, ọ rụrụ ọrụ ọtụtụ afọ na mgbasa ozi mpaghara dị iche iche, ọrụ ọ jikọtara na otu n'ime nnukwu agụụ ya: njem.
Njem site na mba Basque
Ndụ ya gbanwere mgbe o kpebiri ịgbaso otu n'ime nrọ ya, ịga njem ala na ọdịdị ala nke Basque Country. Atụmatụ ya bụ ịga ọtụtụ narị ụzọ gasị na mpaghara akụkọ ihe mere eme nke Euskal Herria, ma saịtị ndị njem nleta na ime obodo. Imezu ọchịchọ ya mere ka ọ banye akwụkwọ, malitere ide akwukwo banyere njem ya na njeghari ya na obodo Spanish.
Site na ntuziaka ndị a, Ebumnuche bụ isi nke onye edemede ahụ bụ ịkwalite nleta na saịtị nwere nnukwu njem nleta, mana nke amachaghị. Ọ rụzuola ya n'ụzọ dị mfe: o nyela ndụmọdụ dị iche iche dabere na nyocha ya na obodo Basque. Ọtụtụ n'ime akwụkwọ ndị a ekwe omume ekele maka nkwado nke Álvaro Muñoz.
Na 2013, gosiputara akwukwo mbu ya, nke ọ kpọrọ aha Ndagwurugwu na-enweghị aha; akụkọ ihe mere eme banyere obodo ya. N'ihi nnabata dị mma nke akwụkwọ mbụ a, otu afọ ka e mesịrị, ọ bipụtara saga nke ndị na-atọ ụtọ Nordic oku Mpụ nke ụlọ ọkụ (2014). Usoro a nwere ọrụ anọ: Lightlọ elu nke ịgbachi nkịtị (2014), Onyunyo Factory (2015), Ikpeazụ Akelarre (2016) na Ogige Nnu (2017).
Mgbe ihe ịga nke ọma nke saga —Nke ahụ na-akọ akụkọ ndụ onye dere Leire Altuna—, bipụtara The tulip agba egwu (2019). Site na akwukwo akwukwo a, onye edemede Basque jisiri ike ido onwe ya n’etiti ndi kachasi nma nke ndi mmadu, n’ihi itinye aka na ya n’ile otutu ndi nagu. Na 2021, gara n'ihu na ndi mmadu, na ngosi nke ya ọhụrụ akwụkwọ: Oge nke seagull.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Black akwụkwọ » The tulip agba egwu
Paula Gallego. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke ink na-eme ka anyị dịrị n'otu